သားဖွားမီးယပ် | MyanCare
ရာသီလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ တွေ့ကြုံနေရလဲ?
by myatlynn | Jul 28, 2020 | သားဖွားမီးယပ်
ရာသီလာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့ တွေ့ကြုံနေရလဲ? အမျိုးသမီးအများစုမှာ ရာသီသွေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး အများဆုံးဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကတော့ ၁. ရာသီသွေးဆင်းတာ အရမ်းများလို့ နည်းလို့ ၂. ရာသီလာတဲ့အချိန်နောက်ကျနေတာတွေ စောနေတာတွေ ၃. ရာသီလာတဲ့အခါနာကျင်တာတွေ ၄....
“ဟာ…ဒီအချိန်ရောက်လာပြန်ပြီ။ သုံးလေးရက်လောက် အဲလိုနာတာမျိူးတွေကိုပြန်ခံစားရတော့မယ်
“ဟာ…ဒီအချိန်ရောက်လာပြန်ပြီ။ သုံးလေးရက်လောက် အဲလိုနာတာမျိူးတွေကိုပြန်ခံစားရတော့မယ်” ပထမဆုံးရာသီလာတဲ့အချိန်စလို့ အခုချိန်ထိ နှစ်တွေ လတွေ အများကြီးကျော်ဖြတ်ခဲ့ပြီးလည်း ဒီအချိန်ပြန်ရောက်လာရင်တော့ စိတ်ညစ်ကြတာကတော့ မိန်းကလေးတွေတိုင်းပါပဲ။ စလာတဲ့ရက်ကစလို့...
by myatlynn | Aug 5, 2020 | သားဖွားမီးယပ်
ဓမ္မတာလာတဲ့အခါ ခံစားရတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပြီး တခြားကြုံရနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ – ဖောရောင်ခြင်း၊ စိတ်ဆတ်ခြင်း၊ ခါးနာခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ ရင်သားရောင်ခြင်း၊ ဝက်ခြံများပေါက်ခြင်း၊...
ဘာလို့ မိန်းကလေးတွေမှာ အဖြူ ဆင်းနေတာလဲ?
ဘာလို့ မိန်းကလေးတွေမှာ အဖြူ ဆင်းနေတာလဲ? ============================== By: ဒေါက်တာပိုင်သက်အောင် . မိန်းကလေးတယောက် အဖြစ်မွေးဖွားလာခဲ့ရင်တော့ လတိုင်း ရာသီသွေး ဆင်းတဲ့ ကိစ္စကို ကြုံကြရမှာပါ။ ရာသီလာတာ သားသမီးရယူနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ဘုရားပေးတဲ့ လက်ဆောင်ဖြစ်သလို တချို့...
သိသင့်သိထိုက်သော ကလေးငယ်များ အကြောင်း
ကျွန်တော်တို့ဟာ ကလေးတယောက် နောင်တချိန် ဘာဖြစ်မလဲ ဆိုတာကို စိုးရိမ်ပူပန်နေကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးလေး ဒီနေ့ ဘာဖြစ်နေလဲ ဆိုတာကိုတော့ ဂရုစိုက်ဖို့ မေ့နေကြတယ်
ဘေဘီလေးတို့ မိတ်ဖုလေးတွေထွက်ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ?